kkchha.com:: स्याङ्जाको उत्तरी क्षेत्रको केन्द्र बन्दै जुग्ले बजार
स्याङ्जा जिल्लाको उत्तरी भेगको सेतिदोभान गा.वि.स. वाड नं २ मा रहेको छ जुग्ले बजार । पवित्र तिर्थस्थल अन्धाअन्धी, पञ्चासे र नेपालको पर्यटकिय नमुना गाउँ सिरुबारी जाने बाटो यही जुग्ले हो । सिद्धार्थ राजमार्गको नागडाडाँबाट ९ किलोमिटर टाढा रहेको यस ठाउँको नजिक बाट आधिखोला कलकल आवाज निकाल्दै बगेको छ । विशेष गरी व्यापार व्यवसायको लागी सानो शहर भए पनि यस वरपर गाउँ छन् । देशको बरोजगार समस्याले यस ठाउँका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको लागी कतार,साउदी,कुवेत,कोरिया लगायतका देशहरुमा गएका छन् । प्रायको मुख्य पेसा कृषि भएता पनि यहांका मानिसहरु व्यापार व्यावसाय र राष्ट्र् सेवक कर्मचारी मा पनि संलग्न छन् ।
यो बजारमा किनमेलको लागि छिमेकी गाउ बिकास समिती चिलाउनेबास, बिचारीचौतरा, बाङ्सिङ, बागेफडकेका बिभिन्न ठाउँबाट मानिसहरु आउने गर्दछन । यस बजारको आस पासमा लोप हुन लागेका घुमाउरा (घुमाउने) घरहरु समेत देख्न पाईन्छ । जुन घरहरु पर्यटकिय हिसाबले भबिश्यमा चाख लाग्दा बिषय बन्न सक्छन ।
पूजा अर्चना गर्न यहाँ एउटा गणेश मन्दिर छ जसमा शिवरात्रि र जनैपूर्णिमामा विशेष मेला लाग्दछ । खानेपानी, विजुली, सडक आदिको सुविधा राम्रै छ । वित्तिय संस्था तर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंक र उपल्लो आधिंखोला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जनतालाई सुविधा दिएका छन् । बालरञ्जन प्रा.वि. र आधिंखोला बोडिङ स्कुल यहाँका प्रमुख शैक्षिक संस्था हुन् । कृषकहरुलाई चाहिने सम्पुर्ण मल, बिउ हालै स्थापना भएको जुग्ले उपभोक्ता सहकारी संस्थाबाट पाउन सकिन्छ । सामाजिक कार्यका लागि जुग्ले युवा कलब समेत सन्चालित भएअको छ ।